Suavecito - Grooming Spray | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Suavecito - Grooming Spray 8oz (Non-Aerosol, Multi-Purpose Hairspray)
Suavecito - Grooming Spray 8oz (Non-Aerosol, Multi-Purpose Hairspray)
အမျိုးအစား: စွယ်စုံသုံး Hairspray အရည်
--Adds Extra Strong Hold | Low Shine | Water-Based Hairspray--
Suavecito - Grooming Spray သည် ကမ္ဘာကျော် လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Suavecito - USA မှ ထုတ်လုပ်ထားသော စွယ်စုံသုံး Non-Aerosol Hairspray အရည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကေသာကို ဝေဆာစေရန် နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် အထောက်ကူပြုပေးပါသည်။ Suavecito - Grooming Spray ကို ခေါင်းလိမ်းဆီများနှင့်အတူ အသုံးပြုရုံသာမက၊ တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကြာကြာအသုံးခံမည့် 8 fl oz/247ml ဘူးကြီး ပမာဏပါဝင်ပါသည်။
စွယ်စုံသုံး Non-Aerosol Hairspray အရည်
ခေါင်းလိမ်းဆီများ၏ ဆံပင်မာစေမှုနှင့် ထိန်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း
သီးသန့်အသုံးပြုပါက Light Hold ထိန်းအား ပေးခြင်း
ကြာကြာအသုံးခံမည့် 8 fl oz/247ml ဘူးကြီးအရွယ်အစား
Suavecito - Grooming Spray ကို ခေါင်းလိမ်းဆီနှင့် ဆံပင်ပုံသွင်းနေချိန်တွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆံပင်မာစေမှုနှင့် ထိန်းအားပိုကောင်းအောင် မြှင့်တင်ပေးပြီး၊ ဆံပင်ပုံစံကို ပို၍တာရှည်ခံစေပါသည်။
တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်အသုံးပြုလျှင် သဘာဝကျကျဆံပင်ပုံစံနှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Light Hold ထိန်းအားကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံမသွင်းမှီ (သို့မဟုတ်) ဆံပင်ပုံသွင်းနေချိန်တွင် အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီခြောက်ကပ်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး ပုံသွင်းရလွယ်ကူစေပါသည်။
ခေါင်းလျှော်ပြီးခါစ အစိုဓာတ်ရှိနေသော ဆံပင်တွင် Pre-styler အဖြစ်အသုံးပြုပြီး လက်နှင့်ဖွ၍ လေမှုတ်အခြောက်ခံပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲရှိစေပါမည်။
This non-aerosol, multi-purpose hairspray makes sure that your hair stays true to your command. Suavecito Grooming Spray can be used asastandalone product or for addingaperformance boost and extra strong hold to your favorite hair-styling products. A couple pumps of this spray providesasmoother and non-sticky styling section in moulding your hair.
When used asastandalone product, it gives youanatural looking hairstyle with light hold. Use together with your favorite pomades for an all-day gripping hold. Comes inalong lasting big 8 fl oz/247ml size pump spray bottle.
Non-aerosol & Multifunctional
Adds Extra Strong Hold
Light Hold when used as standalone
Provides smooth and easier styling section
Water Based - washes out easily
Long lasting big 8 fl oz/247ml size bottle
Apply to recently washed damp hair and blowdry for extra volume.
Spritzacouple pumps of this spray to dry hair before applying pomade forasmoother styling section, reducing tug and pull.
Use it during or at the end of your styling section to lock in your look.
It will serve you good in whichever way you use it.